Ukuziphatha kokuhlela | Hlobisa | Hlobisa
Ubukhali nokuba sobala.
Inqubomgomo yethu yokuhlela isuselwa kumaphoyinti ayi-7 aqinisekisa ukuthi konke okuqukethwe kwethu kuzoba lukhuni, kuthembeke, kuthembeke futhi kube sobala.
Sifuna kube lula ngawe ukuthi wazi obhala ini emvelweni nasolwazini lwethu kufanele ukwenze.
Sifuna wazi imithombo yethu, ngubani esiphefumulelwe ngaye futhi izindlela namathuluzi esiwasebenzisayo.
Sisebenza ukwenza konke lokhu ngokunikeza abafundi ithuba lokuthi basazise nganoma yimaphi amaphutha abawatholayo nanoma yikuphi ukuthuthuka abafuna ukukuphakamisa.
Ku-intanethi enesifo se-infoxication, kubaluleke kakhulu ukukwazi ukuhlukanisa phakathi kwemidiya ethembekile nengathembekile.
Sisekela izindinganiso zethu zokuhlela kumaphuzu ayi-7, esizowakhulisa ngezansi:
Ukuba yiqiniso kwemininingwane
Yonke imininingwane esiyishicilelayo iqinisekisiwe ukuqinisekisa ukuthi iyiqiniso. Ukufeza le nhloso, sizama ukubhala phansi ngemithombo eyinhloko, okugxilwe kuyo yizindaba, futhi ngaleyo ndlela sigweme ukungaqondi noma ukutolikwa okungalungile kolwazi.
Asinayo intshisekelo yezepolitiki noma yezohwebo futhi sibhala ngokungathathi hlangothi, sizama ukuba njalo njengenhloso ngangokunokwenzeka lapho siletha izindaba futhi sinikeza ubuchwepheshe bethu ekubuyekezweni komkhiqizo nasekuqhathanisweni.
Umhleli ngamunye wazi kahle isihloko esisebenzayo. Sisebenzelana nochwepheshe emkhakheni ngamunye. Abantu abakhombisa nsuku zonke ukuthi banolwazi olukhulu esihlokweni ababhala ngaso. Ukuze ubazi sishiya imininingwane ngabo futhi sixhumane namaphrofayili abo omphakathi kanye ne-biography.
Konke okuqukethwe esikushicilelayo kungokoqobo. Asikopishi noma sihumushe kusuka kweminye imidiya. Sixhuma emithonjeni ehambisanayo uma siyisebenzisile, futhi sicaphuna abanikazi bezithombe, imithombo yezindaba nezinsizakusebenza esizisebenzisayo ukunikeza ulwazi olunembe kakhulu ngangokunokwenzeka, okusho ukuthi igunya elifanele.
Asisebenzisi izihloko zezindaba ezingamanga noma ezithokozisayo ukuze sihehe umfundi ngaphandle kokuthi izindaba zenze lutho. Sinenkani futhi sineqiniso, ngakho-ke izihloko zezindatshana zethu zihambelana nalokho ozokuthola kokuqukethwe kwethu. Asikhiqizi okulindelwe mayelana nokuqukethwe okungekho emzimbeni wezindaba.
Ikhwalithi nokugqama kokuqukethwe
Sakha izindatshana ezisezingeni nokuqukethwe futhi siqhubeka sifuna ubuhle kuyo. Ukuzama ukunakekela yonke imininingwane nokusondeza umfundi kulwazi abalifunayo futhi abaludingayo.
Noma nini lapho sithola iphutha noma silixhumana nalo, siyibuyekeza bese siyayilungisa. Sinohlelo lwangaphakathi lokulawula amaphutha olusisiza ukuthi sihlale senza ama-athikili ethu kahle, futhi siwavimbele ukuthi angaphinde enzeke ngokuzayo.
Sithuthukisa njalo okuqukethwe kumasayithi ethu. Ngakolunye uhlangothi, ukulungisa amaphutha, ngakolunye, ukwandisa ama-tutorials nokuqukethwe okungapheli. Ngenxa yalo mkhuba, konke okuqukethwe kwamawebhu kuguqulwa kube inkomba nokuqukethwe okuwusizo kubo bonke abafundi, noma nini lapho kufundwa.
Uma unesikhalazo noma isiphakamiso sokwenza ngendatshana noma umbhali, sikumema ukuthi usebenzise i- ifomu lokuxhumana.